अन्तर्वाता « Nepal – the country of the Buddha and the Mt. Everest
Archive for the ‘अन्तर्वाता’ Category
Posted in Article, अन्तर्वाता | Tagged: Buddha, Buddha born in Nepal, Kapilvastu, Lumbini | LeaveaComment »
‘बानले आउने भनेपछि सरकारले निम्तो पठाएको’
नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल यतिखेर शान्तिसँग जोडिएका दुइटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा छन् । एउटा, बृहत्तर राष्ट्रिय लुम्बिनी विकास निर्देशक समिति सदस्यका रुपमा उनी बुद्धको शान्ति सन्देश विश्वभर फैलाउन त्यस क्षेत्रको बृहत् विकासको योजना बनाउने र सहयोग खोज्ने काममा लागिपरेका छन् । अर्कोतर्फ, माओवादी लडाकुको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापनासम्बन्धी विशेष समितिमा रहेर पाँच वर्षदेखि चलिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने जिम्मेवारीमा छन् । यी दुई विषयकै सेरोफेरोमा रहेर सरोजराज अधिकारी र कुलचन्द्र न्यौपानेले उनीसँग शनिबार गरेको संवाद:
राष्ट्रसंघीय महासचिव बान-कि मुन नेपाल आउने टुंगो भयो त ?
आउनुहुन्छ । उहाँले आउने मनसायको पत्र लेख्नुभएको थियो । त्यसपछि सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले आमन्त्रण गर्नुभएको छ । उहाँको भ्रमण नेपालको समग्र परिस्थितिसँग सम्बन्धित हो । स्वाभाविक रूपमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान लेखनमा लागेका नेतासँग भेटघाट हुन्छ । भोलिपल्ट उहाँ लुम्बिनी जानुहुन्छ । त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना हुँदै छ । कार्यक्रमको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ, तर उहाँ आउनुहुन्छ ।
बानको भ्रमण लुम्बिनीको विकाससँग मात्र जोडिएको छ कि नेपालको समग्र सन्दर्भसँगै ?
राष्ट्रसंघका महासचिवजस्तो व्यक्तिको भ्रमण नेपालको समग्र सन्दर्भसँग जोडिन्छ नै । राष्ट्रसंघसँग नेपाल सरकारको लामो सम्बन्ध छ, हामी सदस्य पनि हौं । राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा नेपाल पहिल्यैदेखि सहभागी रहँदै आएको छ । राष्ट्रसंघका विभिन्न संस्थाले नेपालको विकासमा सघाएका छन् । यसपालिको भ्रमणको महत्त्वपूर्ण आयाम भनेको लुम्बिनी भ्रमण पनि हो । लुम्बिनीको विकासमा महासचिव बानले देखाउनुभएको प्रतिबद्धताप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्छ ।
एकथरी त भ्रमण रोक्न ‘लबिइङ’ गर्दै हिँडेका छन् नि ?
देशमा शान्ति हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक संविधान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मानिसमध्ये कसैलाई यो भ्रमण नहुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको होला । कसैलाई भ्रमण हुँदा फाइदा हुन्छ भन्ने लागेको छ, हामी त्यसमा पर्छौं । तर कसैले भनेको कुरालाई बिल्कुल गलत भन्दिनँ । बिपी कोइरालाले ‘जेल जर्नल’ मा लेख्नुभएको- ‘सत्य बहुआयामिक हुँदोरहेछ’ भनेर लेखेको वाक्य मेरा लागि सधैं मार्गदर्शक बनेको छ । मैले यस विषयमा लिएको अडान नै अन्तिम सत्य हो भनेर भन्दिनँ । तर शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि कुन बाटो उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा भ्रमण उचित छैन भन्नेको भन्दा मेरो विचार फरक छ । Read the rest of this entry »
Posted in अन्तर्वाता | 1 Comment »
नमुना बन्ने प्रयत्न गर्नेछु बाबुराम भट्टराई, नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री चुनिएलगत्तै आइतबार साँझ सरकारका प्राथमिकता र चुनौतीलगायत विषयमा कान्तिपुरका गोपाल खनाल र गंगा बीसीले भट्टराईसँग गरेको कुराकानी-
तपाईंका प्रमुख प्राथमिकता के-के हुन् ?
पहिलो प्राथमिकता विस्तृत शान्ति सम्झौताअन्तर्गत मुलुकलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनु हो । त्यसका निम्ति कार्यतालिका बनाइसकेका छौं । राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो अभिभारा पूरा गर्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । दोस्रो, ठूलो राजनीतिक कार्यभार संविधानसभाबाट अग्रगामी संघीय ढाँचासहितको संविधान बनाउने नै हो । त्यसका निम्ति राष्ट्रिय सहमति बनाउने काम हो । यी प्रमुख प्रथमिकता हुन् । तेस्रो भनेको जनता गरिबी, बेरोजगारी र महँगीबाट पीडित छन् । ती जनतालाई राहत दिन के गर्न सक्छांै, त्यसका लागि राहत प्रदान गर्ने हुन्छ । चौथो, राज्यसत्ता ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त छ । जनताले सेवा राम्रो नपाएको स्थिति छ, त्यसका लागि सुशासन दिने प्रयत्न हुन्छ । त्यसका लागि आफू नमुना बनेर देखाउने प्रयत्न हुन्छ । पाँचौं, समग्र आर्थिक विकास नगरेसम्म देशको विकास गर्न सक्दनौं । छोटो समयमा धेरै गर्न नसकिएला तर लगानी मैत्री वातावरण बनाएर अघि बढ्ने र रोजगारी सिर्जना गर्न आर्थिक विकासको प्रारूप तयार गर्ने काम पनि हुन्छ ।
तपाईं अप्ठ्यारो स्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ, कसरी यो अप्ठ्यारो यात्रामा सफलता पाउनु हुन्छ ?
यात्रा अप्ठ्यारो घुम्ती हुँदै गन्तव्यमा पुग्छ । सजिलो यात्राबाट मात्र गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने होइन । शान्ति र संविधान मुख्य कार्यभार हो । बहुमतीय प्रणालीबाट सरकार बने पनि राजनीतिक मुद्दामा सहमतिबाट अघि बढ्छ । संविधान निर्माण दुई तिहाइ बहुमतबाटै अघि बढ्छ । त्यसका निम्ति सबै प्रमुख दलको सहभागिताबिना सम्भव छैन । राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ । सरकारमा सहमति बनेन भन्दैमा शान्ति र संविधानमा राष्ट्रिय सहमति बन्दैन भन्ने हुँदैन । सबै प्रमुख दलका प्रमुख नेता रहेको उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउँछौं । Read the rest of this entry »
Posted in अन्तर्वाता | LeaveaComment »
मैले ०५३ सालमा गुन्युचोली नामक फिल्मबाट अभिनय यात्रा सुरु गरेको हुँ । त्यसै क्रममा मैले अधुरो प्रेम, चन्द्र-सूर्यलगायतका भिडियो फिल्ममा अभिनय गरेको थिएँ । पहिला फिल्म क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्ने र कसरी स्थापित हुने भन्नेमै तनाब भयो । त्यतिवेला फिल्ममा प्रवेश गर्न अहिलेजस्तो सहज थिएन । म जहिले पनि प्रगतिशील विचारको भएकाले नेपाली मौलिक भेषभुषा गुन्युचोली नाममै बनेको फिल्मबाट ठूलो पर्दाको अभिनय सुरु गरेँ । त्यसपछि पनि मैले मनै त हो, तिम्रा लागि, क्रान्ति, किन माया लाएछु, देशद्रोही, माया बसेछलगायतका मायाप्रेमकै विषयका फिल्ममा अभिनय गरेँ । ती फिल्मबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ । फिल्मको प्राविधिक ज्ञानदेेखि लिएर भाषा पनि जान्न र बुझ्न पाएँ । बीचमा मैले विश्वासघात नामक फिल्म पनि निर्देशन गरेँ । तर, त्यो फिल्मका निर्माता विदेशतिर लागेकाले अहिलेसम्म रिलिज हुन सकेको छैन । यी सबै भोगाइले नै मलाई अनुभवी बनाए । जसकारण मैले आवाज र दसगजा निर्माण गर्न सफल भएँ । Read the rest of this entry »
Posted in अन्तर्वाता | Tagged: काँगडा, गौतम बुद्ध, घरवाली बहारवाली, चाँदनी चोक टु चाइना, जन आन्दोलन, टिस्टा, दशगजा, भारतीय सीमा सुरक्षा एसएसबी, माओवादी जनयुद्ध, माधुरी दीक्षित, सहिद भीमदत्त, सीमा अतिक्रमण, १९५० को सन्धि | LeaveaComment »
सहमति भए दुई तिहाइ बहुमत
माओवादी एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको विवादका कारण सरकारले पूर्णता नपाइरहेकै बेला माओवादी अध्यक्ष दाहाल छिट्टै कुरा मिल्नेमा आशावादी देखिए । उनले सहमतिअनुसार अघि बढे यो सरकार दुई तिहाइको बन्ने र त्यसले दुई महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । मन्त्रिपरिषद् विस्तार, शान्ति, संविधान निर्माण र ‘जनयुद्ध’ वर्षगाँठबारे कान्तिपुरका सुधीर शर्मा, गंगा बीसी र कुलचन्द्र न्यौपानेले दाहालसँग गरेको संवाद:सरकारले कहिले पूर्णता पाउला ?
प्रधानमन्त्रीको शपथग्रहण गरेकै दिनमा सरकार निर्माणको विषयलाई पनि आधारभूत रूपमा मिलाउनुपर्थ्यो। तर हुन सकेन । अहिले छलफल चलिरहेको छ । छलफल सकारात्मक दिशातिरै गएको हुनाले एक दुई दिनभित्र टुंगिन्छ भन्ने म ठान्छु ।
किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
मुख्य त सातबुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । त्यो सहमतिका बारेमा एमालेभित्र गम्भीर विवाद हुनु नै सरकार गठनमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण हो ।
सातबुँदे सहमतिलाई एमालेले केही हदसम्म नसच्याएसम्म त्यसलाई लागू गर्न नसकिने निर्णय गरेको छ । यसमा माओवादी संशोधनका लागि तयार देखिन्छ ?
होइन, सातबुँदे सहमति ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भइसक्यो । केही कार्यान्वयन पनि भइसक्यो । त्यही सहमतिका आधारमा झलनाथ खनालजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो । अब त्यो सहमतिलाई संशोधन गरेर अनुमोदन गर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन । सहमतिलाई पहिला ग्रहण गरिसकेपछि त्यसमा भाषा, शैली भविष्यमा प्रस्ट पार्न सकिन्छ । तर सहमतिका आधार नै भत्कने गरी संशोधन गर्न सम्भव छैन । त्यो विल्कुल गलत पनि हुन्छ । जहाँसम्म स्वामित्व एमालेले किन लिएन भन्ने कुरा छ, त्यो उसको आन्तरिक कुरा हो किनकि हामीले लुकेर, छिपेर कुनै गोप्य सहमति गरेका होइनौं ।
Posted in अन्तर्वाता | Tagged: BFBS Gorkha Radio, Fake Lumbini, Kapilvastu, Kapilvastu Day, Kapilvastu Day Movement, Lumbini | LeaveaComment »
राष्ट्रियतामाथि हस्तक्षेपको ग्राइन्ड डिजाइन भइरहेको छ’
By सरोजराज अधिकारी
तपाइर्हरूले भारतीय माओवादीलाई प्रशिक्षण दिएको लस्कर-ए-तोएवासँग सम्बन्ध राखेको भनी भारतीय पक्षबाट गरिएको दाबीका सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ ?
भारतीय पक्षको आरोप पूर्ण रूपमा झूटो, नियोजित र कपोलकल्पित कुरा हो । म पार्टीको तर्फबाट यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै भारत सरकारलाई यसको पुष्टि गर्न चुनौती दिन्छु साथै नेपाल सरकारले यस विषयमा तत्काल छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गरोस् भन्ने माग गर्छु ।
यतिबेला यस्तो कुरा किन आएको होला ?
यो संविधानसभाको म्याद सकिने बेलातिर तयार पारिएको प्रतिवेदन हो भन्ने हामीलाई जानकारी छ । त्यतिखेर भारत र एकथरी नेपालका शक्तिहरू संविधानसभाको म्याद नथप्ने पक्षमा थिए । अर्को, नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन -अनमिन) लाई जसरी पनि फिर्ता पठाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति थियो । भारत पनि त्यही चाहन्थ्यो । खासमा त्यो प्रतिवेदन त्यसैको वातावरण तयार पार्न बनाइएको हो । अहिले चाहिँ राजनीतिक दलबीच बन्न लागेको सहमति बिथोल्न ल्याइएको हुन सक्छ । भारत नेपालमा दीर्घकालीन शान्ति र संविधानको विपक्षमा छ । भारत नेपालको संविधानसभाले संविधान बनाओस् भन्ने पक्षमा छैन । त्यसैले यस किसिमका नियोजित प्रतिवेदन तयार पारे कुनै पनि बेला नेपालमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने आधार बन्छ भन्ने भारतीय सोच छ साथै हामी विस्तारित बैठक गर्दै छौं, त्यसलाई अस्वस्थ बनाउने उद्देश्य पनि देखिन्छ ।
‘त्रिदेशीय रणनीतिक समझदारीको खाँचो’
Posted by Ram Kumar Shrestha on October 31, 2010
ekantipur कान्तिपुर संवाददाता
नेपाल, भारत र चीनबीच रणनीतिक समझदारी कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चीनको चारदिने भ्रमण गरी स्वदेश फर्केका छन् । उक्त प्रस्ताव लिउर उनी छिट्टै भारतसमेत जाने तयारीमा छन् । चीनले माओवादी प्रस्तावलाई सकरात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गर्दै भारतले पनि त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिने उनको विश्वास छ । त्यस्तै छिट्टै सरकार बन्ने अवस्था नभए संविधान संशोधन गरी आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउनु पर्ने बताउँदै दाहालले राजनीतिक सहमति हुने विश्वास समेत व्यक्त गरे । हालैको चीन भ्रमण, राजनीतिक गतिरोध, शान्ति प्रक्रिया र माओवादी अन्तर संघर्षका विषयमा कान्तिपुरका सुधीर सर्मा र गंगा बीसीले उनीसँग गरेका संवाद-
पछिल्लो समयमा माओवादी नेताहरूको चीन भ्रमण बाक्लिएको छ, कारण के हो ?
सामान्यतया सञ्चारमाध्यममा चर्चा भएजस्तो किसिमको भ्रमण हामीले गरेका होइनौं । वैचारिक कारणले चीनमा जेजस्ता प्रयोग भएका छन्, त्यसको अध्ययन गर्ने हाम्रो पार्टीको प्राथमिकताको विषय हो । त्यसकारणले चीनतर्फ हाम्रो ध्यान जाने भयो । दोस्रो, म जतिपटक गएँ, खासखास कारणले गर्दा जानुपरेको छ । पहिलोचोटि बेइजिङ ओलम्पिकको समापन समारोहमा गएँ, त्यसबेला विश्वका नेताहरू पनि गएका थिए । दोस्रोचोटि चीनको आर्थिक विकास स्थितिको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले पार्टीको नेतृत्व गर्दै गएँ । यसपटक सांघाई एक्स्पोमा पुगेँ । यो चीनको मात्र एक्स्पो होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयोजना गरिएको हो । यसमा मलाई विश्व नेताहरूमध्येबाट छानिएको हुनाले समेत जान जरुरी थियो । त्यसकारण मेरो प्रत्येक चीन भ्रमणका विशिष्ट कारणहरू छन् तर कतिपयले त्यसलाई अनावश्यक रूपमा चीनसँग नजिकिएको, कुनै देशविषेशको विरोध गरेको भनेर राजनीतिसँग जोड्न खोजेका छन् जसमा सत्यता छैन । Read the rest of this entry »
Posted in अन्तर्वाता | Tagged: एक्स्पो, कांग्रेस (आइ), चीन, नेपाली कांग्रेस, भारत, राजनीतिक गतिरोध, शान्ति प्रक्रिया पुष्पकमल दाहाल | LeaveaComment »
मलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिन चुनावमा एक मिनेट पनि ढिला गरिएन
० प्रधानमन्त्री चयन गर्न तपाईं संसद्को बैठकमा बस्दाखेरि टेलिभिजनमा आएको तपाईंको अनुहार हेर्नभएको भए तपाईं एकदम दुःखी देखिनुहुन्थ्यो आँखाबाट आँसु झर्लाजस्तै, रुनै लागेजस्तै देखिएको थियो। कस्तो लागेको थियो तपाईंलाई? – यो हेर्न मान्छेको नजरिया हुनसक्छ। त्यतिखेर यो देशमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नका लागि हामीले अरु दुई घण्टा टाइम लिन पाएनौँ। तपाईंले देख्नु भो ७ गते पनि प्रधानमन्त्रीको चुनाव भयो। चुनाव बिहान ११ बजे हुनुपर्ने, राति सात बजे भयो। तर, मेरो पालामा दुई बजे हुनुपर्ने दुई बजे नै सुरु भयो। दुई बजे नै सुरु गर्दा पनि झ48डै दुई तिहाइ बहुमत आयो।
० तपाईंले जहिले पनि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ भन्नुभयो। तर, माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेन। अझ अहिले त सरकार नै नभएको गम्भीर अवस्थामा गुजि्ररहेको छ, यसलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनुभएको छ?
– मलाई अहिले पनि विश्वास छ कि फेरि पनि राष्ट्रिय सहमतिकै सरकार बन्छ र त्यो सरकार बनाउन मिहिनेत गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेले त्यो मिहिनेत गर्दैछ, त्याग गर्दैछ। त्यसैगरी अरु पार्टी पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन लाग्नुपर्छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अनिवार्य छ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नबनाउनुको अर्थ के हुन्छ भने शान्ति र संविधान हुँदैन।
० कहिलेसम्म बन्छ त राष्ट्रिय सहमतिको सरकार?
– अहिले नै हाम्रासामु अवसर छन्। अवसरबाट हामी वञ्चित भएका छैनौँ। त्यो अवसरलाई चिन्न, र उपयोग गर्नसक्नुपर्छ। अब १७ गतेसम्म जुन चुनावको अवधि छ यसबीचमा पनि सहमतिका सम्भावना छन्। यो समय पनि अनमोल छ र मैले सबै राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई हार्दिक रुपमा आग्रह गरिरहेको छु। हामी खालि कुर्सी र पदको मोहमा नफसौँ। हामी सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री भएँ भनेर झुण्ड्याउने मोहमा नफसौँ। यो त सुन्दा आदर्शवादी कुरा भयो। Read the rest of this entry »
‘सहमति भए प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु’
माओवादी पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भइरहेका बेला उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बहुमतीय सरकारले शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा नपुर्‍याउने बताएका छन् । उनले जसको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार भए पनि समस्या समाधान नहुने भन्दै संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर भए पनि सहमतीय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । शान्ति, संविधान र सरकार निर्माणका विषयमा कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र गंगा बीसीले उनीसँग शनिबार बिहान गरेको संवादः
दलहरूले दुईपटक निर्वाचन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन गर्नर् सकेनन्, यसले जनतामा निराशा बढ्दै गएजस्तो लाग्दैन ?
जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि जनतामा परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा र विश्वास थियो । केही समययता त्यसमा ह्रास आएको छ । अहिले शान्ति र संविधानका निम्ति राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्नुपर्ने जुन आवश्यकता थियो, त्यतापट्ट िनगएर हामी फेरि बहुमतीय सरकार बनाउने खेलमा लाग्यौं । त्यसले सुखद् परिणाम दिइरहेको छैन । कुनै व्यक्तिविशेषलाई दोष दिनुभन्दा सहमतीय प्रणालीको विकल्प छैन । अहिले बहुमतीय प्रणालीमा जाने जुन प्रयत्न भइरहेको छ त्यसले समस्याको समाधान गर्दैन ।
तपाईंहरू किन बहुमतीय आधारमा सरकार बनाउन लागिपर्नुभएको त ?
विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानमा सहमतीय प्रणालीको व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनपछि सहमतीय प्रणालीलाई छाड्नु नै सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो, दुई वर्षको अनुभवले त्यो देखाएको छ । चाहे माओवादीको बहुमतीय सरकार होस्, चाहे एमालेको, त्यसले शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सकेन भनेर प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अब कुनै पार्टीको नेतृत्वमा बहुमतीय सरकार बनाउनु समस्याको समाधान होइन । सबै पक्ष मिलेर राष्ट्रिय संयुक्त सरकार बनाउनु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले माओवादीले सकेन अरूले सके भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा होइन । एक्लाएक्लै कसैले सक्दैनन् । सबै ठूला पार्टी मिल्नुको अब विकल्प छैन । Read the rest of this entry »
Posted in अन्तर्वाता | Tagged: एमाले, कांग्रेस, गणतन्त्र, जनमुक्ति सेना, धर्मनिरपेक्षता, नेपाल, पञ्चायत, पुष्पकमल दाहाल, बहुमतीय सरकार, बाबुराम भट्टराई, मधेसवादी, माओवादी, राष्ट्रिय सेना, संघीयता, संविधान, सहमतीय सरकार, सुगौली सन्धि, सेना समायोजन |2Comments »